बालसाहित्य प्रतिष्ठान नेपाल: 2010-07-25
Children's Poetry by Senior Writer Boond Rana गुजी पाएँ ! - वरिष्ठ लेखक बूँद राना
गुजी हेर्ने रहर थियो नदेखेको कैल्यै
एक टुक्रा दियालोको झोसें आगो मैले
चुपचाप चोर-चाल आँटीमाथि पुगें
सोलीभरि सेल देखी बल्ल कुरा बुझें
यौटा सेल टिपी दौडी बज्यैछेउ आएँ
हाँस्तै भनें- 'इ बज्यै ! मैले गुजी पाएँ !'
'छि ! मलाई त योसँग बोल्न पनि मन लाग्दैन ।'
'हो भन्या हेर न सधैं टासिँन आउछे ।'
'कत्ति न जान्ने भएर बोलिरा'की हुन्छे फेरी ……………'
रमिला ,कोपिला र उत्तम कक्षामा खासखुस गरिरहेका थिए । अलिपर सरितासँग बसिरहेकी पारु बडो मायालाग्दो अनुहार पारेर यताउता हेरिरहेकी थिई । कक्षामा उसलाई पढ्न पनि मन लाग्दैनथ्यो । सर मिसले पनि वास्तै नगरेजस्तो कस्तो कस्तो लागिरहन्थ्यो । ऊ हरेक दिन निहाउरिदैं स्कूल पुग्थी अनि त्यस्तै गरेर घर फर्किन्थी ।
घरमा पनि खासै वोल्दिनथी । मलाई केही खान मनछैन फन्फनिदै हिड्थी ।
आमाले माया गरेर खाजा दिइसकेपछि भन्थी -'म भोलिदेखी स्कूल जान्न्न हैं'
'पढेर आउदा पनि तँ किन ठूलै मेलो जितेर आएजस्तो गर्छेस् नानु, स्कूल नजाने भन्ने पनि हुन्छ पढ्न जान परि गो नि ।' आमा हर्कानुहन्थ्यो ।
जान्न भनेपछि जान्न के………। ऊ भूतभुताउदै निस्कन्थी । कहाँ जान्थी आमालाई पत्तै हुनैनथ्यो । सुरेश आले र कमली उसैलाई पर्खैर बसिरहेका हुन्थे । उनीहरु गुच्चा खेल्थे । घण्टौ बालुवामा लडिबुडी गर्थे अनि अवेर फर्कन्थे ।
घर फर्कदा बुबा पनि कामबाट फर्किसक्नुभएको हुन्थ्यो ।
कहाँ गएकी पारु अहिलेसम्म ?
होमवर्क पनि गर्नु पर्दैन ?
ऊ नसुने झैं गर्थी । जव आमाले बुबाको कुरामा हा मा हा मिलाउनुहन्थ्यो अनि ऊ रुन थाल्थी ।
कोही मेरो कुरै बुझ्दैनन् । मलाई हामवर्क सोमवर्क गर्नुछैन । म स्कूल जान्न । त्यास्तो जावो स्कूल । बरु म त कमलीहरुसँगै खेल्छु । एकैसासमा भनिभ्याउथी ऊ ।
हरेक दिन रडाको मच्चाएर स्कूल पठाउनुपर्थ्यो । पारुको पारा देखेर आमा दिक्क भैसक्नुभएको थियो । त्यस्तैमा जाडो विदाको बेला पारेर शहरमा पढ्ने दाजु घर आउनुभयो । दाजु आएपछि त झन् पारु उग्र देखिई । विद्यालय जान पटक्कै मानिन ।
पहिला-पहिला स्कूल जान भनेपछि फुर्किएर दौडने आफ्नी बहिनीको बदलिदों रुप देखेर दाजु छक्क पर्नुभयो । उहाँलाइ लाग्यो गाली गरेर यो मान्नेवाला छैन तर किन जान मानिन यो चाहिं पत्ता लगाउनुपर्यो ।
होस् मेरी नानु स्कूल जान्न मसँग घुम्न जान्छे । आमालाई इशाराले चूप हुन सिकाउदै मायालु आवाजमा दाजु बोल्नुभयो ।
स्कूलकै वाटो भएर हिड्दा पारुका साथीहरु खेलीरहेका थिएँ तर कसैले पनि बहिनीलाई वास्तै नगरेको देखेर उहाँलाई नराम्रो लाथ्यो ।
भोलिपल्ट शनिबारको दिन थियो । दाजुबहिनी नुहाइधुवाइ गर्न भनेर खोलातिर गएँ । फर्केपछि दाजुले उसको कपाल कोरिदिन खोज्नुभयो ।
'वाफरे ! टाउकोमा त जुम्राले गुँडै लगाइसकेछ । आमा के हो यो यसको तपाई ख्यालै गर्नुहुन्न कि के हो ?'दाजु कराउनुभयो ।
'घरधन्दा भन्यो के भन्यो म भ्याउदै भ्याउन्न । फेरी यो पनि त कहाँ सानी छे र दश वर्षकी भैसकी कपाल कोर्न सक्दिन र ?'
'पुल्पुलिएकी कहीकी, लगा न चड्कन ।' आमा उल्टै रिसाउनु पो भयो ।
दाजुले तेल लगाएर विस्तारै उसको कपाल कोरिदिनुभयो ।
'कत्ति फोहरी नानु तँ तलाई यो जुम्राले डोरी लगाएर रुखमा झुण्ड्याउने वेला भैसकेछ । अवदेखी म तलाई नानु हैन जुम्री भनेर बोलाउछु हैं ।' उहाँले जिस्क्याउदै भन्नुभयो ।
पारु कालेनीलो भएर रुन लागी । 'मलाई कोही पनि मन पर्दैन मलाई कसैले पनि माया गर्दैन । म घरमा पनि बस्दिन स्कूल पनि जान्न । कमली र सुरेशकहाँ बस्छु
'ऊ रिसाएर हिड्न खोजी ।
'अरे ! मेरी नानु मैले त जिस्क्याएको पो त । नरिसाऊ हिड बजार जाऊ
' दाजुले बल्लबल्ल उसलाई मनाउनु भयो ।
आइतबारको दिन दाजु पनि सँगै बस्ने शर्तमा पारु स्कूल गई । साच्चै नै पारु त्याहा एक्लीएकी रहिछ । उसका त साथी नै रहेनछन् ।
दाजुले बच्चाहरुको खासखुस् गरेको सुन्नुभयो 'आज त्यो जुम्रीसँग को आएछ ?'
आफ्नी बहिनी फोहरी भएकैले सबैले हेला गर्दा रहेछन् भन्ने थाहा पाएर उहाँलाई दुख लाथ्यो र मनमनै प्रण गर्नुभयो म मेरी नानुलाईं सफा चंचल मिहिनेती र अरुभन्दा अझ प्यारी बनाएरै छाड्नेछु ।
दाजु आएपछिका दिन उसलाई रमाइलो लाग्न थालेको थियो । उहाँ उसको राम्रो ख्याल गर्नुहुन्थ्यो । होमवर्क सिकाइदिनुहुन्थ्यो । आफैंले विद्यालयको लागि तयार गरेर पुर्याइदिनुहुन्थ्यो । अनि फुस्रदमा घुमाउनु हुन्थ्यो मीठोमीठो कथा सुनाउनुहन्थ्यो ।
साँच्चै केहीदिन मै पारु हसिलीखुसिली देखिई । कहिल्यै पाठ नबुझाउने पारु अरुभन्दा पहिला उठेर होमवर्क बुझाउन थालेको नजानेको कुरा सोधेको देखेर सर-मिस पनि खुसी हुनुभयो । हेर्दाहेर्दै उसका धेरै साथी भएँ ।
अर्को एकविहान ऊ चिच्याउदै थिई । 'आमा ! छिटो खाजा राखिदिनुस् मलाई स्कूल जान ढिला भैसक्यो । '
यो २०६० सालको कुरा हो जति बेला म कक्षा ९ मा पढथें, त्यतिबेला मैले मेरी प्यारी हजुरआमालाई गुमाएको थिएँ । त्यो बेला मलाई राम्ररी थाहा छ भोलिपल्टको दिन असार ३ गते मेरो चौधौं जन्मदिन थियो अनि हजुरआमाको आशिर्वाद थाप्नु अगाडि नै उहाँले यस संसारबाट बिदा लिनुभएको थियो । सधैं उपहारहरु प्राप्त गरेर मेरो जन्मदिन रमाइलो हुन्थ्यो तर चौधौं जन्मदिनमा मैले ममतामयी हजुरआमाको काख गुमाएको थिएँ, जुन काखमा मैले मेरो जीवनको आरम्भ गरेकी थिएँ । मेरो बालसुलभ मस्तिकमा त्यसबेला प्रश्नहरु छरिएका थिए । यस संसारबाट बिदा लिएर मेरी हजुरआमा कहाँ जानुभयो होला ? मैले यही प्रश्न विस्तारै मेरी आमालाई सोधेकी थिए अनि उहाँले भन्नुभएको थियो भगवानको घर जानुभयो जहाँ गएपछि कोही पनि फर्केर आउन सक्दैन । मैले अझ प्रश्नहरु थप्न लागेको थिएँ उहाँले फेरि भन्नुभयो तिमी ठूली भएपछि बुझ्ने छौं । उहाँले मलाई चुप त गराउनु भयो तर मेरा मनमा भने हुरी चल्न थाल्यो । भगवानको घर कहाँ होला ? किन त्यहाँ गएपछि फर्कन नमिल्ने होला ? त्यसै दिनताका मलाई उदास देखेर फेरि आमाले मलाई सम्झाउनु भएको थियो । भगवानको घर बादलपारि तारै-तारा भएको ठाउँमा हुन्छ रे, त्यहाँ फूलैफूलको सुन्दर बगैंचा अनि रमाइलो बातावरण हुन्छ रे जसलाई स्वर्ग भन्ने गरिन्छ अनि त्यसैले त्यहाँ जाने मानिसहरुलाई स्वर्गिय भनेको हो । मलाई सम्झाउँदै गर्दा उहाँ रे ...... रे......... भन्दै हुनुहुन्थ्यो सायद उहाँलाई पनि कसैले त्यस्तै भनेको थियो होला ? मलाई अलि ढुक्क त लागेको थियो किनकि मेरी प्यारी हजुरआमा तारै-ताराको झिलिमिली र फूलैफूलको सुगन्धमा हुनुहुन्छ । उहाँ स्वर्गे भएको बर्षमै मैले बीर गणेशमान सिंह बालप्रतिभा पुरस्कार प्राप्त गरेर बर्ष बालक २०६० को उपाधि पाएकी थिएँ । मैले खुशी हुँदै त्यो ताम्रपत्रलाई आकाशतर्फ फर्काएर हजुरआमालाई देखाएको थिएँ ।सायद देख्नु भयो होला जस्तै लागेको थियो । म जहिले पनि उहाँलाई सम्झदा आकाश तर्फ हेरेर बादलपारि स्वर्गमा बस्ने हजुरआमालाई हेर्ने प्रयास गर्थें अनि नीलो आकाशमा भएका सेता बादलहरुले विभिन्न आकारमा उड्दै जाँदा म बादलको आकारमा मेरी हजुरआमाको रुपको कल्पना गर्थें जसले गर्दा मलाई उहाँसंग भेट भएको भान हुन्थ्यो ।
समयको अन्तरालमा मेरा दिनहरु बित्दै गए अनि ममा बालसुलभता हराउँदै गयो जीवनको अर्थ पनि पहिल्याउँदै गएँ । मैले मेरो जीवनको २० सौं बसन्तको हाराहारीमा आइपुग्दा अकस्मात् फेरि एउटा बिर्सन नसक्ने दुर्घटना भयो । मेरी प्यारी साथी मालश्रीको कर्णालीमा डुङ्गा दुर्घटनामा मृत्यु भयो । कर्णालीको छालले उनलाई सायद बादलपारि पुर्यायो र्स्वर्गमा, अनि उनी स्वर्गिय हुन पुगिन् मेरी हजुरआमा जस्तै । यस पटक भने उ कहाँ गई भनेर मैले कसैलाई सोधिन । जीवन र मृत्यु, शुरु र अन्त्य जस्तै हो पूरै नबुझेपनि सामान्यरुपमा स्वीकार्न करै लाग्यो असामयीक भएपनि मृत्यु त मृत्यु नै हो ।
हामीहरु सामाजिक प्राणी भएकाले मन त्यसै भौतारिदो रहेंछ अनि अन्त्यमा मनलाई हलुका पार्ने त आँशुनै रहेछ मनको साथी । बिछोडको पीडालाई भुल्न धेरै रोंए रुदाँरुदै मन हलुका भयो अनि मलाई लाग्यो भगवानको घर त आफ्नै मनभित्र पो रहेछ जहाँ सधैं मेरी हजुरआमा र मेरी प्यारी साथी मालश्रीले दरिलो डेरा जमाएका छन् । म रुँदै थिएँ मेरो ९ बर्षे अबोध भाइले भन्यो "दिदी तिमी किन यति धेरै रोएको ? " मैले रुँदै भने "मालश्री दिदी भगवानको घर गइन् त्यसैले रुन मन लाग्यो" भाइले फेरि प्रश्न गर्यो "भगवानको घर कहाँ छ ? भगवानको घर माथि आकाशमा बादल पारि छ । त्यहाँ तारैताराहरुको झिलिमिली छ अनि फूलैफूलको सुन्दर बगैंचा छ भनेर भाइलाई सम्झाए । उसको बाल सोचाइले यसको के अर्थ लगायो मलाई थाहा भएन । मैले जीवन र मृत्यु स्वभाविक हो, यो संसार भन्दा बेग्लै अर्को संसार छैन अनि भगवानको घर कल्पना मात्र हो, मनलाई बुझाउने बहाना मात्र हो भनेर बुझेपनि भाइलाई बुझाउन सकिन । तसर्थ मैले पनि आमाले मलाई भने जस्तै गरी उसलाइ भनें- तिमीले ठूलो भएपछि बुझ्नेछौ ।
(लेखिका क्षेत्रीको प्रकाशोन्मुख कृति मालश्री बाट साभार)
Email : shlesma41@hotmail.com